चप्पल र हाफ पाइन्ट लगाएर लौरो टेक्दै अछाम पुगे यि मन्त्री ! के गर्दैछन् बाढीग्रस्त क्षेत्रमा – Namaste Dainik
August 26, 2020 NamastedainikLeaveaComment on चप्पल र हाफ पाइन्ट लगाएर लौरो टेक्दै अछाम पुगे यि मन्त्री ! के गर्दैछन् बाढीग्रस्त क्षेत्रमा
महेन्द्रनगर,भदौ १०/चप्पल,हाफ पाइन्ट,टिसर्ट र मुखमा मास्क लगाई लौरो टेकेर हिँड्दै मोटो शरीर भएका एकजना व्यक्ति अछाम रामारोशनका बाढीपीडतबीच पुगे। साथमा थिए केहि सुरक्षाकर्मी र सहयोगी।
यसरी धेरै तडक भडकबिना दुर्गम गाउँ पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरा अहिले चर्चामा छन्। उनी त्यसरी गाउँ पुग्दाका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्।
मन्त्री बोहरा अछाममा गत मंगलवार राति अबिरल वर्षासँगै आएको बाढीले प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेका हुन्।
त्यही क्रममा निकै अप्ठेरो बाटो छिचोल्दै हिडिरहेका तस्बिर धेरैले सामाजिक सञ्जालमा राखेर मन्त्री बोहराको प्रशंसा गरेको देखिन्छ।
स्थलगत निरीक्षण र राहतका लागि भन्दै दलबलसहित अछाम पुगेका गृहमन्त्री थापाले जनताले लगाएको बालीमाथि उभिएर भाषण गरेको भनी आलोचना भएको थियो।
अछामको रामारोशन गाउँपालिका–५ को स्थानीय कैलाश खोलामा बस्तीमा पस्दा १७ जना बेपत्ता भएका थिए। तीमध्ये ८ जनाको शव भेटिएको छ भने ९ जना अझै बेपत्ता छन्।
बाढीले त्यहाँका स्थानीयको घर, खेत बगाएर बगरमा परिणत गरेको छ। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रामारोशन गाउँपालिका–५ मा बाढीले बितण्डा मच्चाएको दुखद खबर सोहि प्रदेशका मन्त्री बोहराले बुधवार बिहान ५ बजेतिर जानकारी पाए।
त्यसपछि उनी बाढी पीडितहरुको व्यवस्थापन,राहत वितरण तथा उद्धारमा जुटेका हुन्। शनिवार राहत सामग्री लिएर बोहरा,उनको सचिवालयका सदस्य सहित ८ जनाको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा निस्कियो।
धनगढीबाट गाडीमा गएको मन्त्री बोहराको अनुगमन टोली आइतवार अछाम पुग्यो। त्यसपछि उनी लौरो टेकेर बाढी प्रभावित गाउँ–गाउँ पुगे। बाढीले क्षति पुर्‍याएका घर,बाटोघाटो,कुलो,नहर,विद्युत गृह, सिँचाई,सडक पुल एक–एक गरी अनुगमन गरिरहेको अर्थमन्त्री बोहराका स्वकीय सचिव आदर्श साउँदले बताए।
‘कैलाश खोलाले प्रभावित हरेक ठाउँको अनुगमन गरिरहेका छौँ,पीडितसँग भेटघाट गरेर समस्याहरु बुझिरहेका छौँ,’उनले नेपालखबरसंग भने,‘बाढीपहिरो प्रभावित अन्य ठाउँको पनि अनुगमन गर्ने योजना छ।’
अनुगमन टोली बुधवार कैलाश खोलाले सबैभन्दा बढि मानवीय र भौतिक क्षति गरेको सैनिबजार पुगेको छ।
मन्त्री बोहराले अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन, पीडितहरुसंग भेटघाट गरेर मृतकका परिवारलाई सान्त्वना दिएका छन्।
उनी बुधवार मृतकका मलामीमा पनि सहभागी भए। यसैबीच प्रदेश सरकारले मृतक परिवारलाई एक-एक लाख दिने निर्णय गरेको छ।
साथै घाइतेहरुको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने र बाढी प्रभावितका नानीबाबुहरुलाई माध्यमिक शिक्षासम्म पठनपाठनका लागि प्रदेश सरकारमा छलफल गर्ने र आफ्नो क्षेत्रबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन मन्त्री बोहराले दिए।
३ लाख ६२ हजारको खाद्यान्न सामग्री वितरण
बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनका लागि रामारोशन गाउँपालिका–५ पुगेका मन्त्री बोहराले राहत सामग्री बोकेर गएका थिए।
आफ्नो व्यक्तिगत स्रोतबाट ३ लाख ६२ हजार रकम बराबरको खाद्यान्न सामग्री बाढी प्रभावितलाई वितरण गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। गाउँपालिका कार्यालयमार्फत उनले बाढी प्रभावितलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्।